व्यापार, साना व्यापार
प्रत्येक व्यक्ति कि जीवनको सपना उपस्थित खाना स्वादिष्ट, महंगा लुगा र पर्स को मोटाइ छ, राम्रो छ। त्यसैले, कसरी शून्य चिन्ता धेरै गर्ने "काम तिनका मामा मा" संग व्यापार गर्न को प्रश्न अब चाहन्थे, र आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने निर्णय गरे। तपाईं अक्सर आवश्यकता तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ संलग्न कि राय सुन्न सक्नुहुन्छ। आखिर, आजको बजार मा त्यहाँ एक फल रूपमा सफल व्यापारीहरु छन्, र बल्लतल्ल समाप्त सुन र चाँदीको विक्रेता पूरा बनाउन। तर तपाईं स्पष्ट त्यसपछि स्क्राच देखि एक व्यापार खोल्ने, सफल लक्ष्य, बौद्धिक मेहनती र इच्छुक सेट भने - तपाईं चुनौती लागि यो doable छ।
बाटो संगठन: स्क्राच देखि व्यापार
तपाईं कसरी स्क्राच देखि व्यापार गर्न निर्णय गर्नु अघि, तपाईं के व्यापार संगठन को प्रकार अवस्थित बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँ दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो - यो आफ्नै मौलिक विचार जीवनमा embodied छ। जो अझै, केही नयाँ पत्ता लगाउन, तर सबै तपाईं आवश्यक छ। बजार मा एक monopolist बन्न। दोस्रो तरिका - एक समाप्त विचार को बोध छ। तपाईं यसलाई के को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं यसलाई आफ्नै परिवर्तन र थपिएको ल्याउन सक्छ। धेरै अक्सर दोस्रो विकल्प प्रयोग। आखिर, यो सजिलो छ।
मांग मा - कसरी स्क्राच देखि व्यापार गर्न निर्णय गर्दा, तपाईं सार भन्ने महसुस गर्न आवश्यक छ। तपाईं केहि को आवश्यकता छ जो कोहीले को आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् भने तपाईं एक सफल नेतृत्व र व्यापार को असली आय ल्याउँछ हरेक मौका छ।
स्क्राच देखि व्यापार को लागि विचार
एजेन्सी गतिविधि। तपाईं कम्पनी को एक एजेन्ट बन्न र यसको चासो प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। लोकप्रिय आज र मध्यस्थता "खरीदार-विक्रेता" को योजना छ। धेरै सफल कम्पनीहरु आफ्नो माल बिक्री गर्ने हुनेछ र पैसा को यो ठूलो योगफल भुक्तानी गर्न इच्छुक छन् सलाहकार खोजिरहेका छन्।
जनावर लागि सिलाई लुगा। आज, धेरै लोकप्रिय जातिहरु सानो कुकुर purebred। पाल्तु जनावर मालिकको आफ्नो पाल्तु जनावर सजाउनु पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्। कुकुर को लागि एक धेरै सानो लुगा मा सामाग्री को खपत। यो पुतली कपडे कसरी सी छ। र यस्तो लुगा को मूल्य एकदम सभ्य छन्। यो व्यवसाय को लाभकारी एकदम उच्च छ। र को लागि राम्रो लाभ बिक्री को ठूलो मात्रा चाहिन्छ।
घर आधारित व्यापार। यो व्यवसाय मा तपाईं घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोग्राफी बनाउन-अप, दोकान, सौन्दर्य उपचार को सबै प्रकार र यति मा। डी चकलेट केक, beading, सिलाई बैग र यति मा बनाउने। डी यो सबै आफ्नो सीप र प्रतिभा मा निर्भर गर्दछ।
दल, banquets र उत्सव को संगठन। तपाईं गतिविधिहरु र व्यापार लकीर को किसिम को एक विचार छ भने, त्यसपछि किन छैन? तपाईं हल को सजावट, साँझ को विकास, उपस्थापक, जोकर वा जादुगर रूपमा धेरै काम गर्न सक्छन्। यो सबै आफ्नो कल्पना र इच्छा मा निर्भर गर्दछ।
कफी मिसिन वा शीतल पेय। तपाईं स्पेस 1 वर्ग मीटर भाडामा सक्नुहुन्छ, पेय पदार्थ उत्पादन हुनेछ, र पैसा गर्न तयार एक मिसिन किन्न। समय समयमा, यो, मेशिन भर्न साथै नगद झिक्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा राम्रो स्थान चयन गर्न छ जहाँ आगंतुकों एक कप कफी रमाइलो गर्न चाहने धेरै। समय, कुरा राम्रो भने, यो सम्भव यस्तो उपकरणहरू को नेटवर्क विकास गर्न छ।
माथिको कसरी स्क्राच देखि व्यापार गर्न केही विचारहरू छन्। तिनीहरूलाई केही हुन सक्छ, र सबै उपलब्ध छैन। त्यसैले, तपाईं चयन गर्नुहोस् वा तपाईंको व्यापार विचार संग आउनु पर्छ। तपाईंको प्रयासहरूलाई राम्रो भाग्य र मनपर्ने कुरा तीन धन्यवाद कि सम्झना!
उत्पादन सहकारी को संकेत। व्यवस्था "कानूनी संस्थाहरू को राज्य दर्ता र व्यक्तिगत व्यवसायी"
आदेश खडा को उत्पादन
के थप resell गर्न लाभदायक छ? एक लाभदायक व्यवसाय तरिका
गाडी पार्ट्स स्टोर कसरी खोल्न
कसरी तिनीहरू सधैं सुन्दर फक्रिएको दिनुभएको peonies हेरचाह गर्न
रहस्यमय निकलने वाला गुलाबी - यो के हो?
एक कद्दू कसरी कटौती गर्ने? एक कद्दू काट्न सकिन्छ?
को घन्टी लागि आधार - हात बनाएको आभूषण सिर्जना लागि एक महत्वपूर्ण तत्व
Multivarka "रेडमन्ड" मा मकै खाना पकाउनु? Multivarki "रेडमन्ड" को लागि व्यञ्जनहरु
स्वतंत्र लेखकहरूले लागि सुझाव: धेरै कसरी बनाउने
धूमिल देखि sprats कसरी तयार: व्यञ्जनहरु
विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य: Pushkin (पर्म) स्मारक